Madaxweynaha iyo wafdigiisi oo soo gabo gabeeyay booqashadii Suudaan
SONNA January 3, 2012 Markacadeey
Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigii uu hoggaaminayay ayaa soo gaba gabeeyay safarkii ay ku joogeen dalka Suudaan, iyadoo kulamadii ay la qaateen mas’uuliyiinta dowladda Suudaan uu ku soo dhamaaday guul.
Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdiga uu hogaaminayo oo mudo laba maalin ah ku sugnaa dalka Suudaan ayaa maanta xaflad sagootin ah loogu sameeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Khartuum.
Madaxweynaha ayaa kulan xalay kula qaatay madaxtooyada Qaranka dalka Suudaan dhigiisa dalkaasi Cumar Xasan Al-Bashiir waxeyna labada Madaxweyne ka wada hadleen dib u dhiska dalka iyo ka qeyb qaadashada tababarada ciidamada dowladda Soomaaliya.
Sidoo kale Madaxweynaha iyo wafdigii la socday waxa ay booqdeen intii ay ku sugnaayeen dalkaasi warshada daabaceysa lacagta Shilinka Soomaaliga ah oo haatan ka socota dalkaasi, waxaana uu Madaxweynuhu sheegay in dib loo dhigo daabicida lacagta loogu talagalay dalka si loo dajiyo dalka si ay saameyn ugu yeelan dadka Soomaaliyeed.
Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda ay soo gaaraan magaalada Muqdisho iyadoo soo dhaweynta Madaxweynaha iyo xubnaha la socda ay si toos ah uga socota garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho.